Tsy Hita Nanjavonana Tao Amin’ny Nitazonana Azy Ilay Shinoa Mpikatroka Nanao T-Shirt ‘Xitler’ · Global Voices teny Malagasy
Tsy Hita Nanjavonana Tao Amin'ny Nitazonana Azy Ilay Shinoa Mpikatroka Nanao T-Shirt ‘Xitler’
Voadika ny 07 Novambra 2016 13:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, 简体中文, Ελληνικά, Español, Nederlands, বাংলা, 繁體中文, Italiano, English
Sary: Twitter/Kwon Pyong.
Nosoratan'i Catherine Lai ity lahatsoratra ity, ary nivoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 3 Novambra 2016. Navoaka eto amin'ny Global Voices noho ny fifanarahana fiaraha-miasa ny dika eto ambany.
Voalaza fa notànana tao Jilin , Shina ny mpikatroka 28 taona, antsoina hoe Kwon Pyong, rehefa nizara fikasana fanaovana t-shirt misy soratra milaza fihetseham-po manohitra ny Filoha Shinoa Xi Jinping.
Ny T-shirt, hita etsy ambony, dia ahitana ny anaran'ny fianakavian'ny Filoha Xi mitambatra amin'ny anarana Hitler.
Nilaza tamin'ny namany izy teo aloha fa mikasa ny hanao ny t-shirt misy hafatra manohitra an'i Xi eny an-dalana tamin'ny 1 Oktobra izay fetim-pirenen'i Shina. Nilaza ireo naman'i Kwon Pyong – izay teratany Koreana ary nianatra tany ivelany any Etazonia teo aloha fa tsy nahazo fifandraisana taminy intsony izy ireo efa ho iray volana izay.
Ny naman'i Kwon atao hoe Gu Yi, izay nianatra tany ivelany tany Etazonia, nilaza fa nahazo hafatra avy amin'i Kwon izy tamin'ny 30 Septambra izay manao hoe: “misy zavatra [ratsy] mitranga”. Tsy afaka nifandray taminy anefa i Gu mandraka androany. Nilaza tamin'ny Onjampeo Radio Free Asia izay tohanan'ny Amerikana ny manamboninahitra iray tao amin'ny sampan-draharahan'ny polisy Yanji fa voatazona ao amin'ny polisy i Kwon amin'izao fotoana izao. Tsy afaka nanamarina an-telefaonina ny fitazonana an'i Kwon tamin'ny Hong Kong Free Press anefa ny manampahefana tao amin'io sampan-draharahan'ny polisy io ihany,.
Nilaza i Gu fa efa nantsoina hiresaka amin'ny mpiandraikitra ny mpitandro ny filaminana i Kwon teo taloha taorian'ny nandefasany karatra paositra (cartes postales) an'ireo mpisolovavan'ny zon'olombelona voatazona. Nilaza tao amin'ny Radio Free Asia i Gu hoe:
Nilaza tamiko anefa izy tamin'ny 30 Septambra fa nikasa handendeha miaraka amin'ilay T-shirt. Nilaza taminy aho mba tsy hanao izany, kanefa nikiry izy […] Tsy nieritreritra izahay fa hiteraka olana ho azy izany, satria efa nitondra izany karazana T-shirt izany izy teo aloha.
Navitrika nisioka lohahevitra famoretana mpisolovava ao Shina i Kwon, ny fandripahana tao Tiananmen, Tibet, ny fahaleovantenan'i Hong Kong, ny zon'olombelona, sy ny fihetseham-po hafa manohitra ny governemanta Shinoa:
Tiako ny hahita ny fananganana an'i Hong Kong mahaleotena rahatrizay. https://t.co/9WHb6AbTv4
Tamin'ny faran'ny volana Aogositra, namoaka ny sarin'ny tenany miaraka amin'ny T-shirt tao amin'ny Twitter i Kwon, sady nilaza fa avy amin'ny aingam-panahin'i Rose Tang, mpitarika mpianatra sady mpikatroka teo aloha tao amin'ny Kianja Tiananmen tao amin'ny sioka iray ny “Xitler”. Eo ambanin'ny teny hoe “Xitler”- misy fehezanteny Shinoa milaza hoe: “Xi Baozi” (karazana mofo noandrahoina tamin'ny etona) sy “Big Spender” (Mpandanilany vola) samy manondro am-panesoana ny mpitarika Shinoa. Ny sarin'ny ao ambadika no mety ahitana ny antsipirian'ny toerana misy azy ao Shina.
Naneho hevitra momba ny fisamborana azy i Tang :
Iray amin'ireo tanora Shinoa tena vitsy izay sahy miteny manakiana ny governemanta Shinoa ao amin'ny Twitter miaraka amin'ny fampiasana ny tena anarany izy. Nampiasa famoretana tamin'ireo Shinoa mpisera Twitter i Beijing nandritra ny taona maro, fa nanome famantarana vaovao momba ny onjam-pamoretana, ezahina hampihenana ny hetsika mitsilopilopy tsy fahita firy momba ireo mpomba ny demokrasia sy ny zon'olombelona izay efa nosakanana hatramin'ny nandraisan'i Xi Jinping ny fitondrana, amin'ny tanora mpisera Twitter ny raharaha momba azy izao .
Namoaka fanambarana manameloka ny fihazonana an'i Kwon sady nitaky ny famotsorana azy ny vondron'ny Federasion'ny Mpianatra Shinoa sy Manam-pahaizana monina any Etazonia.
Manampy ny olona manerana izao tontolo izao hikarakara ny fanaovana ny t-shirt mitovy amin'ny an'i Kwon i Gu sy hanao hetsi-panoherana eo ivelan'ny Masoivoho Shinoa manerana izao tontolo izao.